Chelsea oo reebtay Middlesbrough, una sii dhawaatay hanashada horyaalka - BBC News Somali
Chelsea oo reebtay Middlesbrough, una sii dhawaatay hanashada horyaalka
9 Maajo 2017
Image caption Diego Costa ayaa xalay dhaliyay goolkiisa 20-aad ee xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska
Kooxda Chelsea ayaa hal guul oo kaliya waxaa uga harsan inay qaaddo koobka Horyaalka Ingiriiska kaddib markii ay xalay Horyaalka ka saartayba kooxda Middlesbrough oo ay garoonkeeda Stamford Bridge 3-0 ku dubatay.
Goolasha Kooxda uu tababaro Antonio Conte ay uga badisay kooxda Middlesbrough ayaa waxaa u kala dhaliyay ciyaartoyda kala ah Diego Costa, Marcos Alonso iyo Nemanja Matic, waxayna Chelsea noqonaysaa horyaalka Ingiriiska haddii ay Jimcaha ka badiso kooxda West Bromwich.
Middlesbrough oo ay laba ciyaarood u harsan tahay ayaa todoba dhibcood waxa ay ka hoosaysaa barta badbaadada, waxa ayna Horyaalka Championship-ka xagaaga dambe ka wada dheeli doonaan kooxda ay ka wada dhisan yihiin waqooyi bari England ee Sunderland.
Kooxda tababare Steve Agnew ayaa u muuqatay mid aan firficoonayn, iyadoo kooxda ay martida u aheyd ee Chelsea ay iska khasaarisay fursado goolal loo fishay.
Chelsea ayaa ku dheelaysay kalsoonida ay leedahay koox horyaal ku guulaysatay oo kale, oo xitaa haddii aanay dhibcaha ka qaadan kooxda West Bromwich, waxaa u harsan laba kulan oo kale oo gurigeeda ay kula dheeli doonto kooxda Watford iyo Sunderland si ay markii labaad muddo saddex sano ah ugu guulaysato horyaalka Ingiriiska.